အသေးစားချေးငွေ | ထွေထွေထူးထူး ကိုရွှေထူး
Leaveareply	မြန်မာနိုင်ငံမှာ စီးပွားရေး ကျပ်တည်းမှုတွေကို ထောက်ပြလာကြတာ များတယ်…. ဒါဖြင့် သူများနိုင်ငံတွေမှာလို Micro Financing အသေးစား ငွေချေးလုပ်ငန်း မရှိဘူးလားဆိုရင် Micro Financing တွေ မြန်မာပြည်မှာ ရှိတယ်၊ လုပ်လည်း လုပ်နေတယ်… UN ကလည်း ကမကထ လုပ်ပေးတယ်…. သိသလောက်လည်း PACT Myanmar တို့ ဘာတို့ ရှိတယ်…. ချေးငွေ ဆပ်တဲ့စနစ်က ၀ိုင်းကြီးချုပ်လို လုပ်ထားတယ်…. ဥပမာ အားဖြင့် လူ ၅ ယောက်တစ်စု ဖွဲ့လိုက်တယ်…. အဲ့အစုထဲက တစ်ယောက်ကို ပိုက်ဆံချေးတယ်….. အဲ့တစ်ယောက် မှန်မှန်ပြန်ဆပ်လို့ ကျေရင် နောက်တစ်ယောက်ကို ချေးတယ်……. အချင်းချင်း ပြန်ချုပ်တဲ့ စနစ်ပေါ့…….. ပိုက်ဆံချေးတဲ့လူ ပြန်မဆပ်ရင်တော့ အဲ့ဒိလူစုက ကျန်တဲ့လူတွေ စုဖွဲ့ပြန်လျော်ရတယ်……
အဲ့မှာ တစ်ယောကက်စပီး ငွေအကြေမဆပ်ပဲ စည်းကမ်းဖောက်တော့ ကျန်တဲ့လူတွေ သေရော…. ကိုယ်ချေးမယ့် အလှည့်မရောက်သေးဘူး အကြွေးပါ ဆပ်ပေးရတယ်…… ဒီလိုမျိုးတွေ ဖြစ်တာ ခဏခဏ တွေ့ရတယ်…… အဓိက လောင်းကစားနဲ့ အပျော်အပါး နှိပ်စက်မှုဒဏ်တွေလည်း ပါတယ်၊ လွယ်လွယ်ရ လွယ်လွယ်သုံးချင်တဲ့ စိတ်ဓါတ်တွေကြောင့်လည်း ပါတယ်……..
အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့က စည်းကမ်းမရှိရင် ချေးမယ့်လူလည်း စည်းကမ်းနဲ့က မညီတော့ ထပ်ချေးဖို့က မဖြစ်နိုင်…… အဲ့ဒါတွေ အဆင်မပြေတာကနေ အောင်မြင်သင့်သလောက် မအောင်မြင်တာပဲ…… အဓိက လွယ်လွယ်ရရင် လွယ်လွယ်သုံးချင်တဲ့ အချောင်သမား စိတ်ဓါတ်တွေကိုလည်း အသိပညာပေးဖို့ လိုတယ်…. လောင်းကစားတွေလည်း ထိထိ ရောက်ရောက် နှိမ်နှင်းနိုင်ဖို့လိုတယ်….. ဒါကဘယ်လိုပဲ ကူညီကူညီ ပင်ကိုယ်စိတ်ဓါတ်ကို အသိဥာဏ်မြင့်တင်ပေးခြင်း၊ ပညာပေးခြင်း မလုပ်နိုင်သရွေ့ ဖြစ်လာမယ့် ကိစ္စတွေ…..
နောက်ပီး လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ များလာရင်၊ ကမ္ဘာရွာဖြစ်ခြင်း အကျိုးဆက်အနေနဲ့ကတော့ လုပ်ငန်းသေးတွေ ထိခိုက်မှု ရှိလာမယ့် ကိစ္စတွေ ဖြစ်လာမှာပဲ…… ဥပမာ မြန်မာပြည်မှာ မက်ဒေါ်နယ်လို Fast Food ဆိုင်မျိုးတွေ အများကြီး လာဖွင့်မယ်ဆိုရင် သူတို့ရဲ့ ဖြုန်းအားကြီးမားမှုကြောင့် ဈေးသက်သက်သာသာနဲ့ ရောင်းနိုင်မယ်…. အဲ့ဒါဆိုရင် တစ်နိုင်တစ်ပိုင်၊ ထမင်းဆိုင်၊ မုန့်ဟင်းခါးဆိုင်တွေ နားသွားနိုင်တယ်….
စီပီ ကြက်သားဆိုင်တွေ ရန်ကုန်အနှံ့ဖွင့်ခါစက မအောင်မြင်လောက်ဘူးလို့ လူတွေ ခန့်မှန်းခဲ့ကြတယ်…. ဒါပေမယ့် အခုတော့ အတော့်ကို လည်ပါတ်နေတယ် ကြက်ကျော်တစ်တုံး ၅၀၀ ထမင်းတစ်နပ်ကို ကောင်းကောင်းစားလို့ ရတယ်လေ… အပြင်မှာ ဟင်းတစ်ခွက်က ၅၀၀ နဲ့က မအိုကေဘူးလေ…. အဲ့တော့ လုပ်ငန်းကြီးတွေ စီးဝင်လာရင် လုပ်ငန်းသေးတွေ ပျောက်သွားနိုင်မယ့်ကိစ္စတွေ၊ ပျောက်သွားမယ့် လုပ်ငန်းသေး လုပ်သူတွေကို နေရာပြန်ချထားရေး၊ အလုပ်အကိုင် ဖော်ဆောင်ရေး ဒါတွေ လိုလာပြန်ကော….. မလုပ်နိုင်ရင်တော့ အလုပ်လက်မဲ့ ဖြစ်ကုန်တဲ့အတွက်၊ စီးပွားရေး မကောင်းလာတဲ့အတွက် မကျေနပ်ပဲ ဆူမှာ ဆန္ဒပြမှာက သေခြာသလောက် ရှိပြန်တယ်…..
ဒီအတွက် အခြေခံလူတန်းစားနဲ့ တစ်နိုင်တစ်ပိုင် စီးပွားရေးသမားတွေအတွက် အသိဥာဏ် ပွင့်လင်းစေတဲ့ ပညာပေးခြင်းမျိုး များများလုပ်သင့်တယ် မြင်ပါတယ်….. အဆိုပါ အောက်ခြေ လူတန်းစားတွေဟာ အတန်းပညာမတတ်၊ ဘွဲ့မရကြလို့ ပညာပေးဖို့ ခဲယဉ်းတယ်လို့ ယူဆလို့ မရပါဘူး……. ပင်ကိုယ် သက်မွေးဝမ်းကြောင်း အသိတွေရှိနေတဲ့အတွက် စဉ်းစားဆင်ခြင် ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ အဆင့်မျိုးလေးဖြစ်အောင် ပံ့ပိုးနိုင်ရင် အဆင်ပြေမယ် ယူဆပါတယ်….. လူမှုဖူလုံရေး ၀န်ကြီးဌာနအနေနဲ့ ဒါတွေကို စနစ်တကျ ပြင်ဆင်လုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်….. နောက်မို့ဆိုရင်တော့ အချောင်သမား စိတ်ဓါတ်တွေ၊ လက်ရှိလုပ်ငန်း ရပ်တန့်သွားလို့ ဘာမှဆက်မလုပ်တတ်တဲ့ လူတွေအများစု ရှိနေသရွေ့ တိုင်းပြည် အေးချမ်းမယ်လို့ မမြင်မိပါ…..
This entry was posted in စီးပွားရေး, မြန်မာသတင်း, News and tagged ချေးငွေ, ဆောင်းပါး, မြန်မာသတင်းများ, မြန်မာနောက်ဆုံးသတင်းများ, မြန်မာ့အသေးစားချေးငွေ, Micro Finance and Myanmar, Micro Financing, Myanmar Update News on February 4, 2013 by koshwehtoo.	Post navigation
← မန်းလေး ဆေးကျောင်းက ကျောင်းသား လေးရာကျော် ကျောင်းထုတ် ခံရတဲ့ကိစ္စ
ပြောပြန်ရင်လည်း လွန်တော့မယ် (၁) →